Xasan Sheekh Ayaa Si Lama Filaan ah ku Gaaray Kismaayo – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Xasan Sheekh Ayaa Si Lama Filaan ah ku Gaaray Kismaayo
Safarka Madaxweynaha ayaa jawaab u ah safar uu jimcihii la soo dhaafay ku tagay Kismaayo Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo ah Musharaxa ay xilligan sida aadka ah ugu loolamayaan doorashada.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu la kulmo Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay Jubbaland, kuwaasoo Axmed Madoobe meel ku xareystay.
Axmed Madoobe ayaa la rumeysan yahay inuu taageersan yahay Cumar C/rashiid, isagoo ka mid ahaa xubnihii Imaaraadka Carabta heshiiska kula galeen in aan Madaxweyne Xasan Sheekh soo laaban mar kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa doonaya inuu meesha ka saaro fikrada Ra’iisul wasaaraha ee ahaa in dalka is bedel u baahan yahay, waxaana uu diyaar u yahay inuu kala fur furo siriqda uu u dhigay Mr Cumar C/rashiid.
Waxaa kaloo Madaxweynuhu weydiisan doonaa in mar kale fursad loo siiyo xilka madaxtinimada, isla markaana ay taageeraan halku dhigiisa ahaa “Qabyo Ninkeeda dhameystiro”.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa noqonaya musharaxa 3aad ee ugu cad cad xilka Madaxweynaha ee iska xaadiriya Kismaayo, iyadoo labo maalin isku xigta ay kala tageen magaaladaas Cumar C/rashiid iyo C/raxmaan C/shakuur oo isku isbaheysi ah.
Previous: Taliska ciidamada booliska ee gobolka Bari ayaa soo saaray digniin loo jeedinayo madaxda maamulka Puntland
Next: Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ayaa baaq kasoo saaray abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya